Published July 28, 2020 at 7:58 AM CDT
Degmada Woodbury maanta waxay leedahay 15 kiis oo cusub oo ah COVID-19. Marka loo eego Waaxda Caafimaadka Dadweynaha Iowa (IDPH), ilaa maantadan la joogo, waxaa guud ahaan gobolka ka jira 3,561 xaaladood oo togan oo ah COVID-19. Ma jiraan dhimashada cusub ee la xiriirta fayraska, taasoo la micno ah in tirada dhimashadu ay tahay 47
Lambarrada ay soo diyaariyeen saraakiisha caafimaadka Iowa ayaa muujinaya in kabadan 800 oo kiis oo ah cudurka coronavirus ayaa laga xaqiijiyey gobolka usbuuc dhammaadka. Taasi waxay keenaysaa wadarta kiisaska la xaqiijiyay ee Iowa in ka badan 42,500 tan iyo markii uu cudurka dillaacay.
Xariirka raadraaca ee gobolka ee coronavirus wuxuu sidoo kale muujiyey daraasiin COVID-19 dil ah oo ka dhacay Iowa usbuuc dhammaadka, taasoo wadarta guud ee gobolka laga dhigay subaxnimadii Isniinta ilaa 832.
Goobta ayaa muujineysa kuwa kuwa cudurka laga helay, in kabadan 29,800 ayaa soo kabsaday. Tirada guud ee dadka lagu tijaabiyey Iowa waxay taagnaayeen 456,385 illaa iyo aroortii hore ee Isniinta.
Saraakiisha caafimaadka ee Nebraska ayaa ku dhawaaqay 224 kiis oo cusub oo wadarta guud ahaa 24,618 xaaladood iyo 316 dhimasho. Ma jirin dhimasho cusub. Degmada Dakota waxaa ku dhacay 1,850 kiis. Gobolka Thurston wuxuu lahaa 196 kiis,
South Dakota waxay dheelitirtay 8,395 xaaladood: iyo 123 dhimasho. Ma jirin dhimasho cusub.
Wadarta kiisaska waxaa ka mid ah 175 gudaha County County, 106 degmada Clay iyo 100 degmada Yankton. Degmooyinka Yankton iyo Ururka midkiiba mid baa diiwaangeliyay laba dhimasho.
Natiijooyinka sahanka cusub ee uu soo saaray xafiiska hanti-dhowrka gobolka maanta (Isniin) ayaa lagu ogaaday in qaar badan oo ka mid ah bixiyayaasha Medicaid ee gobolka aysan ku qanacsaneyn nidaamka gaarka loo leeyahay ee gobolka.
Sahanka waxaa loo diray in kabadan 2,500 oo ah bixiyeyaasha gobolka ee uqalma adeegyada Medicaid. In kabadan 800 ayaa jawaabtey.
Boqolkiiba 41 ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn ama aad ugu qanacsanayn saameynta nidaamka gaarka loo leeyahay ee ku aaddan awoodooda ay ku bixin karaan adeegyada bukaannada Medicaid. Halka rubuc ka mid ah jawaab bixiyaasha ay sheegeen in ay ku qanacsan yihiin ama aad u qanacsan yihiin.
Gov. Pete Ricketts ayaa ka fiirsaday jawaabta faafitaanka ee Nebraska iyo aragtida dakhli ee laga filaayey ee cinwaankiisa Sharci-dejinta. Wuxuu sidoo kale ku riixay sharci-dajiyayaasha in ay qaataan saxeexiisa saxiixiisa ee cashuur dhimista hantida iyo xirmooyinka dhiirrigelinta canshuurta gudahooda 13 maalmood ee kalfadhiga. Guddoomiyaha Jamhuuriga ayaa jimcihii sameeyay cinwaan labaad oo dhif ah isla kalfadhigaas oo kale, kaas oo lagu joojiyay bishii Maarso cabsi laga qabo inuu ku faafo coronavirus. Kalfadhiga maanta ayaa dib loo bilaabay.
Gawaarida Cuntada caanka ah ee Sioux City Jimcaha ayaa ku soo noqon doona magaalada hoose iyada oo waxoogaa tanaasul ah ay ugu wacan tahay walaac laga qabo COVID-19. Gawaarida Cunnada ee Jimcaha ayaa qaadanaya qaab cusub oo wax lagu qabsado, taas oo dadka ku dhiirrigelisa inay cuntadooda geyso gurigooda ama dib ugu noqdaan xafiiskooda.
Local NewsLocalIowaWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaGovernor Pete RickettsFood Truck FridaysnewsSioux City TransitCOVID-19SomaliIDPH
Gobolka Iowa ayaa soo sheegay 512 xaaladood oo kale oo ah coronavirus ilaa galabta. Saraakiisha caafimaadka gobolka ayaa sidoo kale soo sheegaya shan…
Horjoogaha hore ee gobolka Jeremy Taylor ayaa mar kale u tartamaya kursi ka tirsan Golaha Deegaanka ee Woodbury. Kursigaas waxaa hadda haysta Marty…
Tirooyinkii ugu dambeeyay ee cudurka Coronavirus-ka ee Iowa ayaa muujinaya tirada kiisaska la xaqiijiyay in ku dhow labanlaabmay 24-ka saac oo ah min…
Magaalada Sioux City waxay qorsheyneysaa inay u baahan tahay waji-gashi ama waji daboosho dhammaan dhismayaasha magaalada laga bilaabo Arbacada soo…